သံလိုက်ဖြင့် ကြောင်မျက်လုံးဂျယ်လ်ကို ဆွဲဆောင်ရန် မှန်ကန်သောနည်းလမ်း
Cat eye လက်သည်းဆိုးဆေးဆိုတာ ဘာလဲ ? Cats eye လက်သည်းဆိုးဆေးကို နာမည်အရ ကြောင်မျက်လုံးနဲ့တူအောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။၎င်းသည် အလင်းပြောင်းလဲမှုအောက်တွင် မတူညီသော အလင်းနှင့် အရိပ်ကို ပြသနိုင်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်ရန် လက်ပေါ်ရှိ opal ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။1. Cat eye gel လက်သည်းဆိုးဆေး သုံးတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးပါပဲ...
လက်သည်းဂျယ်လ်ကို သိမ်းဆည်းဖို့ နည်းလမ်းမှန်ကို သင်လုပ်ဆောင်ပြီးပြီလား။
Nail gel polish သည် ယေဘူယျအားဖြင့် အချိန်အကြာကြီး သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး မဖွင့်ပါက သက်တမ်းမှာ သုံးနှစ်မှ ငါးနှစ်ဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် ဖွင့်ပြီးရင် ထိန်းသိမ်းထားဖို့ လိုပါတယ်။မမှန်ကန်သော ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် လက်သည်းဆိုးဆေး၏ သက်တမ်းကို အလွန်တိုစေပါသည်။လက်သည်းဆိုးဆေးပုလင်းကြီးတစ်ဘူးရှိလျှင် စိတ်ကူးကြည့်ပါ...
လက်သည်းဆိုးဆေးကို ဘယ်လိုချွတ်ရမလဲ။လက်သည်းခွံထဲက လက်သည်းကော်တွေကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားနည်း။လက်သည်းဆိုးဆေး၏ အခြားအမည်မှာ လက်သည်းနီဆိုးခြင်းဖြစ်ပြီး လက်သည်းများကို တောက်ပလှပစေရန်အတွက် လက်သည်းပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်လိမ်းနိုင်သော ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်လ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကတော့ လက်သည်းဆိုးဆေးရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ အတူတူပါပဲ...
လက်သည်းဆိုးဆေးမှာ အမှုန်အမွှားတွေ ဘယ်လိုရှိနိုင်သလဲ။A- ထွင်းထုပြီးနောက် ဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားရန် စုတ်တံမရှိပါ၊ ဖုန်မှုန့်များကို လုံးလုံးမဖယ်ရှားပါက အမှုန်အမွှားများကို ထုတ်ပေးပါမည်။ မှန်ကန်သောနည်းလမ်း- ထွင်းထုပြီး ကြိတ်ချေပြီးနောက် မျက်နှာပြင်မှ ဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားရန် ဘရပ်ရှ်ကို အသုံးပြုပါ။B: လျှောက်လွှာအမြန်နှုန်းက အရမ်းမြန်တယ်...
ကြောင်မျက်လုံး လက်သည်းဆိုးဆေး အဆင့်ဆင့်
သင့်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ cat eye လက်သည်းဆိုးဆေး၏ အဆင့်များကို ပြသခြင်း - Cat's eye ကော်သည် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော လက်သည်းဆိုးဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။Magnet အမှုန့်ကို opal နှင့်ဆင်တူသည့် အလင်းဖြင့်ထင်ဟပ်ပြီးနောက် light band effect ကို cat's eye gel တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။Cat eye လက်သည်းဆိုးဆေး၏ အဆင့်များ...
လက်သည်းဆိုးဆေး လက်သည်းဆိုးခြင်းအတွက် မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကဘာလဲ။
ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း ပထမဦးစွာ လက်သည်းကို ဒီဇိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း ညှပ်ရန် စံဖိုင်ကို အသုံးပြု၍ လက်သည်းအစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရန်နှင့် လက်သည်းခွံများကို သန့်စင်ရန် လက်သည်းဆိုးဆေးကော်မှ လက်ချောင်းအညစ်အကြေးများ ကပ်ငြိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လက်သည်းထိပ်ဖျားကို အာရုံစိုက်ပါ။ လျင်မြန်စွာထပြီး ပြုတ်ကျဖို့ ထိပ်ဖျား။...
သူငယ်ချင်းတော်တော်များများက လက်သည်းအလှပြင်ဆိုင်ကို အကြိမ်အနည်းငယ် ရောက်ဖူးကြပြီး အားလုံးက အိမ်မှာ လက်သည်းပြုလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိကြပါတယ်။ဒါဆို လက်သည်းဆိုးဖို့ ဘာဝယ်ရမလဲ။ဝယ်ယူရန် လိုအပ်သော ကိရိယာများကို ဤနေရာတွင် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးခွဲထားပြီး လက်သည်းပန်းချီအတွက် သင်ဝယ်ရန် လိုအပ်သည့် ကိရိယာများကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။...
လက်သည်းဆိုးဆေးနဲ့ လက်သည်းဆီ ကွာခြားချက်
ယနေ့ခေတ်တွင် လက်သည်းပန်းချီသည် အများအားဖြင့် ဓာတ်ပုံကုထုံးများဖြစ်သည်။လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်၊ အားဖြည့်ဂျယ်၊ ဆေးခြယ်ထားသော ဂျယ်၊ ထွင်းထားသော ရွှံ့စသည်တို့ပါရှိသည်။ ၎င်းကို ကုထုံးစက်ဖြင့် အခြောက်ခံသင့်သည်။Phototherapy machine ဂျယ်လက်သည်းဆိုးဆေးနှင့် phototherapy အမျိုးအစားရှိ လက်သည်းဆီများသည် တူညီသည်မဟုတ်ပါ။ယခင်ဖော်ပြခဲ့သော n...
Gel Nail polish ဗဟုသုတ
Nail gel polish သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အန္တရာယ်မရှိသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။လက်သည်းဆိုးဆေးကော်သည် ဗောက်ထခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အောက်တွင် ပလပ်စတစ်ကဲ့သို့ ဖလင်ပုံစံဖြစ်လာသောကြောင့် လက်သည်းဆီနှင့် ကွဲပြားသည်။လက်သည်းဆိုးဆေး၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများမှာ အခြေခံအစေး၊ photoinitiator နှင့် အမျိုးမျိုးသော add...
လက်သည်းဂျယ်ဆေးသည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အန္တရာယ်ရှိပါသလား။
Nail gel polish သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အန္တရာယ်မရှိသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်သည် ဗောက်ထခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အောက်တွင် ပလပ်စတစ်ကဲ့သို့ ဖလင်ပုံစံဖြစ်လာသောကြောင့် လက်သည်းဆိုးဆေးနှင့် ကွဲပြားသည်။လက်သည်းဆိုးဆေး၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများမှာ အခြေခံအစေး၊ photoinitiator နှင့် အမျိုးမျိုးသော...
Cat eye လက်သည်းပန်းချီဆိုတာ ဘာလဲ။Cat eye လက်သည်းဆိုးဆေး သံလိုက်ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
Cat eye လက်သည်းပန်းချီဆိုတာ ဘာလဲ။Cat eyes လက်သည်းဆိုးဆေးကို ကြောင်မျက်လုံးနဲ့တူအောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။၎င်းသည် အလင်းပြောင်းလဲမှုအောက်တွင် မတူညီသော အလင်းနှင့် အရိပ်ကို ပြသနိုင်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်ရန် လက်ပေါ်ရှိ opal ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။လက်သည်းပန်းချီဝါသနာပါသော ညီမလေးများ စမ်းသုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။အားလုံးပြီးရင်တော့...
Nail gel အကြောင်း အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးဖြင့် မှန်ကန်စွာ သိမ်းဆည်းပါ။
လက်သည်းဆိုးဆေး အမျိုးအစားများစွာရှိတာကြောင့် လက်သည်းဆိုးဆေးဟာ လက်သည်းဆိုးဆေးနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ လက်သည်းဆိုးဆေးကို မှားမသုံးမိဖို့ သတိပြုပါ။လက်သည်းဆိုးဆေးကို အခြောက်ခံရန်သာလိုသော်လည်း ဂျယ်လက်သည်းဆိုးဆေးကို တောက်ပနေရန်လိုသည်။လက်သည်းဆိုးဆေးကို လက်သည်းဆိုးဆေးနဲ့ သုတ်နိုင်ပြီး လက်သည်းဆိုးဆေးဂျယ်...
<< <ယခင်123456နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၃/၈